Rugta Ganacsiga Indo-German Oo Ku Dhawaaqday Xubno Cusub Oo Ka Tirsan Gudida
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Rugta Ganacsiga Indo-German Oo Ku Dhawaaqday Xubno Cusub Oo Ka Tirsan Gudida
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Rugta Ganacsiga Indo-Jarmal
Rugta Ganacsiga ee Indo-German (IGCC) ayaa maanta ku dhawaaqday magacaabista Puneet Chhatwal, Agaasimaha Maareeyaha & Madaxa Fulinta, Shirkadda Hoteellada Hindiya (IHCL), inay noqoto Madaxweynaha cusub ee Rugta. Hoggaamiye ganacsi oo khibrad leh oo caalami ah, Puneet Chhatwal ayaa xilka kala wareegeysa Madaxweynaha xilka ka degaya, Kersi Hilloo (Agaasimaha Maareeyaha Fuchs Lubricants India).
IGCC waxay kaloo u magacowday Madaxweyne ku -xigeenka cusub iyo Qasnajiga guddigooda.
Jarmalku waa saaxiibka ganacsi ee ugu weyn India ee EU -da iyo kan 7 -aad ee ugu weyn ee maal -galiyayaasha shisheeye ee Hindiya.
IGCC waa rugta ugu weyn Jarmal-Bi-National (AHK) ee dibedda, iyo Rugta Ganacsiga ee ugu weyn Hindiya oo leh in ka badan 4,500 shirkadood oo xubno ka ah qaybaha kala duwan.
IGCC sidoo kale waxay ku dhawaaqday magacaabista xubnaha guddigeeda cusub, Anupam Chaturvedi (Agaasimaha & Madaxa Wakiilka DZ BANK India) oo ah Madaxweyne Ku -xigeenka, iyo Kaushik Shaparia (CEO Deutsche Bank India) oo ah Qasnaji.
Isagoo ka hadlayey munaasabadda, Puneet Chhatwal, MD iyo Maamulaha Guud, IHCL ayaa yiri: “Sharaf bay ii tahay in loo doorto Madaxweyne, waxaana rajeyneynaa inaan horay u sii wadno howsha IGCC si ay u noqoto mid wax weyn ka tara kor u qaadista xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Hindiya iyo Jarmalka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira baahi weyn oo iskaashi caalami ah, waxaanan sii wadi doonnaa inaan ka taageerno shirkadahayada xubnaha ka ah abuurista fursado badan, kordhinta hawlgelinta iyo bixinta qiimaha. ”
Isaga oo ka hadlaya magacaabista cusub, Stefan Halusa, Agaasimaha Guud, IGCC, wuxuu yiri: “Waxaan ku soo dhaweynaynaa xubnaha guddiga cusub IGCC waxaanan ka rajaynaynaa kaalintooda qiimaha leh. Waxaan aaminsanahay in Mr. Chhatwal, doorkiisa Madaxweyne, uu keeni doono waayo -aragnimadiisa ballaaran ee dhaqamada iyo fahamka gaarka ah ee ganacsiga ee Jarmalka iyo Hindiya. Jarmalku waa saaxiibka ganacsi ee ugu weyn India ee EU -da iyo kan 7 -aad ee ugu weyn ee maal -galiyayaasha shisheeye ee Hindiya. Tani waxay na siin doontaa fursad aan ku sahamino aagag cusub oo kobaca dhaqaalaha ah annagoo ka faa'iideysaneyna awoodaha labada ummad. ”
Puneet Chhatwal waxay leedahay ku dhawaad ​​afartan sano oo waayo -aragnimo caalami ah. Wuxuu hadda madax u yahay shirkadda martigelinta ugu weyn uguna caansan Koonfurta Aasiya, IHCL. Intaas ka hor, wuxuu kaalin hoggaamineed ka soo qabtay Jarmalka, iyo Yurub. Wuxuu kaloo yahay Madaxweynaha Ururka Hoteellada Hindiya iyo Guddoomiyaha Guddiga Qaranka ee Dalxiiska CII.
IGCC waa hay'ad aad looga ixtiraamo Hindiya iyo Jarmalka. Waa rugta ugu weyn Jarmal-Bi-National (AHK) ee dibedda, iyo Rugta Ganacsiga ee ugu weyn Hindiya oo leh in ka badan 4500 shirkadood oo xubno ka ah qaybaha kala duwan. Qiyaastii 1,800 oo shirkadood oo Jarmal ah ayaa ka hawlgala Hindiya, kuwaas oo bixiya in ka badan 500,000 oo shaqo gudaha dalka.
Waxaa la aasaasay 1956, Rugta Ganacsiga Indo-Jarmal (IGCC), oo ah urur aan macaash doon ahayn oo leh 65 sano oo xoojinaysa iskaashi ayaa maanta ka jira 6 goobood oo ku yaal Hindiya oo dhan iyo mid ka mid ah Jarmalka. Waxay bixisaa adeegyo badan sida Raadinta Iskaashatada Ganacsiga, Sameynta Shirkadaha, Talo Sharci, Qorista HR, Suuqgeynta iyo Calaamadeynta, Carwooyinka Ganacsiga, Macluumaadka iyo Is-weydaarsiga Aqoonta iyada oo loo marayo Daabacadaha, Ergooyinka iyo Dhacdooyinka, iyo sidoo kale Tababbarka.
Southwest Airlines: Waxaan diidi doonaa mamnuucidda Texas ee ...